वसन्त - Best of Japan
फोटोहरू: वसन्त हिउँ - फूल र माउन्टेन हिउँको आश्चर्यजनक कन्ट्रास्ट
हिउँदमा हिउँको दृश्य देख्नु चाखलाग्दो छ, तर वसन्त inतुमा टाढा हिउँका पहाडहरू हेर्न यो खराब छैन। एक पछि अर्को खिलिएको फूल र दूरीमा हिउँ पर्वतहरू बीचको भिन्नता अद्भुत छ। थप रूपमा, वसन्त ,तुमा, तपाईं भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रमा जान सक्नुहुनेछ, जुन धेरै हिउँका कारण जाडोमा बन्द गरिएको थियो। उदाहरण को लागी, यस पृष्ठ को अन्त मा प्रस्तुत Tateyama (Toyama प्रान्त) हरेक साल अप्रिल मध्य देखि धेरै पर्यटकहरु को भीड हो! सेन्दाई शहरको शिराइसी नदीको किनारमा वसन्त हिउँका फोटाहरू, प्रत्येक वर्ष १,२०० चेरी रूखहरू हिउँले ढाकिएको बगैंचामा पृष्ठभूमिमा राम्ररी फूल्छन् = शटरस्टॉक चेरी फूल फुलेर पहाडी गाउँमा नाग्नो प्रान्तको हकुबा पर्वत श्रृंखलाको पृष्ठभूमिमा। आईवेट प्रान्तमा शटरस्टक कोइवाई फार्म। माउन्ट बीचको भिन्नता। इवाकी र विशाल चेरी रूख सुन्दर छ = शटरस्टॉक डाइसेट्सुआन Asahikawa, Hokkaido = Shutterstock Oze बाट देखिन्छ, जुन गुणमा, फुकुशिमा र Niigata प्रान्तहरू = शटरस्टक माउन्टको दृश्य हो। यामानशी प्रान्तको कावागुची तालको किनारबाट फुजी माउन्ट फुजीको फेदमा मोटोसु ताल नजिकैको शटरस्टक, हरेक वर्ष अप्रिलमा धेरै काई फ्लोक्स खिलिन्छन् = शटरस्टक ताजा हरियो चिया क्षेत्रहरू हिउँले ढाकेका माउन्टसहित। फुजी, शिजुओका प्रीफेक्चर = शटरस्टक तोयामा प्रान्तको तातेयामा पर्वत श्रृंखलामा, हिउँले हिउँका लागि बन्द भएका सडकहरू अप्रिलको अन्तमा पुनः खुल्छन् = शटरस्टक म प्रशंसा गर्दछु ...
जापानमा वसन्तको लागि उत्तम महिना हो। सबै ठाउँमा सुन्दर नयाँ हरियाली चम्किरहेको छ। मानिसहरूले वसन्त फेसनको आनन्द लिइरहेका छन्। हिउँले ढाकेको पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि पर्यटन मौसम सुरु भयो। "गोल्डेन वीक", वा मेको सुरुको बिदा पछि, सबै पर्यटन स्थलहरूमा जापानी पर्यटकको संख्या घट्नेछ र भीड कम हुनेछ। पर्यटक संख्या घट्नेछ। जापान आउनुहोस् यस वर्षको पनि! मेमा जापानी ल्याण्डस्केपको फोटो मेमा जापानी ल्याण्डस्केप मेमा जापानी ल्यान्डस्केप मे मे जापानी ल्यान्डस्केप मे मे जापानी ल्यान्डस्केप मे मे जापानी लैंडस्केप मे मे जापानी ल्यान्डस्केप मे मे जापानी ल्यान्डस्केप मे मे जापानी परिदृश्य म अन्तमा पढ्दा तपाईलाई कदर गर्छु । "May" मा फर्कनुहोस्
यस पृष्ठमा, म होइकाइडो मौसमलाई मइमा परिचय गर्ने छु। यस समयमा, पूर्ण-स्प्रि spring वसन्त होक्काइडोमा आउँदछ। चेरी फूलहरू टोकियो भन्दा एक महिना पछि खिलछन् र रूखहरू एक अद्भुत ताजा हरियो मा बदलिन्छ। तपाईं रमणीय मौसमको साथ सुन्दर पर्यटन क्षेत्रहरूको अन्वेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो लेखले होकाइडोको मे महिनाको मौसम कल्पना गर्न तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मे टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। मे र होक्काइडोको बारेमा प्रश्न-उत्तर होक्कैडोमा मेमा हिउँ पर्दछ? मेमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। जे होस्, केहि ठूला स्की रिसोर्ट्स जस्तै Niseko मा, तपाईं मई about सम्म लगभग स्की गर्न सक्नुहुन्छ। मेमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडोको मेमामा वसन्त मौसम छ। तपाईं आराम सँग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। होक्काइडोमा हामीले कस्तो प्रकारको लुगा लगाउनु पर्छ? वसन्त कपडा मे मा वांछनीय छन्। जापानमा वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाइँ जाडो हिउँ हिउँहरुबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिना हो। यदि तपाईं सुन्दर फूलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने जुलाई र अगस्त सिफारिस गरिन्छ। मेको प्रारम्भमा तपाईले होक्काइडोमा चेरी फूलहरू देख्न सक्नुहुनेछ। मौसम ...
यदि तपाईं मेमा ओसाका भ्रमण गर्नुहुन्छ भने कस्तो खालको लुगा लगाउनु पर्छ? यस पृष्ठमा, म मौसम, वर्षाको मात्रा र मे महिनाको लागि उत्तम लुगाहरूबारे छलफल गर्नेछु। ओसाका मेमा साथै होन्शुका अन्य ठूला शहरहरू जस्तै टोकियोमा धेरै सहज छन्। तपाइँ निश्चय पनि आफ्नो यात्राको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मे टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। ओसाकामा मौसम मेमा (अवलोकन) ग्राफ: ओसाकामा मेमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०) मेमा, ओसाकामा अधिकतम तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस भन्दा न्यानो रहन्छ। प्रत्येक पटक यो वर्षा हुन्छ, रूखहरू र फूलहरू बढ्छन् र उनीहरूको सुन्दर हरियो रंग देखाउँदछ। मानिसहरू अक्सर ओसाका कासल पार्क जस्ता ठूला पार्कहरूको माध्यमबाट घुम्छन्। सामान्यतया: तपाईलाई न्यानो कपडाको आवश्यक पर्दैन जस्तै घामको दिनमा कार्डिगनहरू। जहाँसम्म, यदि तपाइँ सजिलै चिसो हुनुभयो भने, यो केसमा ल्याउँदा एक राम्रो विचार हो। व्यापार मा, हामी जापान मा मे को अन्त्य सम्म सूट लगाउँछौं। हामी प्राय: जून देखि सेप्टेम्बरको अन्तमा सूट ज्याकेट लगाउँदैनौं। जहाँसम्म, अभ्यास फरक फरक छ ...
यदि तपाईं मेमा टोकियो जानु भयो भने मौसम धेरै सहज छ। यो दर्शनीय ठाउँहरू भ्रमण गर्नका लागि उत्तम मौसम हो, त्यसैले सम्भव भएसम्म फाइदा लिनुहोस्। यद्यपि मौसम ढिलो मेमा अस्थिर हुनेछ। यस पृष्ठमा, म जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटाको आधारमा मेमा टोकियोको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मेमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोकियोमा मेमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियोमा मेमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) यदि तपाईं मेमा टोकियो जानुहुन्छ भने तपाईले धेरै आरामदायी यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। माथिको ग्राफले देखाउँदछ, मे र मध्य मेमा, टोकियोमा दिनहरू तातो वा धेरै चिसो हुँदैनन्। व्यायाम गर्दा, तपाईंले पसिना फुटाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो अझै गर्मी जस्तो तातो छैन। तपाईं दिनभरि छोटो-बाहुको शर्ट लगाएर ठीक हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै घमाइला दिनहरू तर केहि बरसातका दिनहरू छन्। कहिलेकाँही धेरै दिन सम्म निरन्तर वर्षा हुन्छ। बरसातको दिन हुनेछ ...
यस पृष्ठमा, म होक्काइडोको अप्रिल महिनाको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। होक्काइडोमा, हिउँ अझै अप्रिलमा पनि पस्न सक्छ। यो दिनको समयमा धेरै तातो हुन्छ तर कहिले कत्ति धेरै चिसो हुन्छ, त्यसैले सावधानी रहनुहोस्। यस लेखले धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई होक्काइडोको अप्रिलमा मौसम कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अप्रिलमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। अप्रिलमा होक्काइडोको बारेमा प्रश्न र उत्तर अप्रिलमा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ? अप्रिलको पहिलो आधामा असहिकावा र सप्पोरो जस्ता केही शहरहरूमा हिउँ पर्न सक्छ। यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा, तपाईंलाई सामान्यतया हिउँले ढाकिएको परिदृश्यहरू फेला पार्न गाह्रो हुनेछ। अर्कोतर्फ, हिउँ अझै पहाडहरूमा खस्दछ। तपाईं अझै निसेको र अन्य स्की रिसोर्टहरूमा जाडोका खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। अप्रिलमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडोको तापमान बिस्तारै अप्रिलमा बढ्नेछ। मध्य अप्रिलमा, दिनको अधिकतम तापमान १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा अप्रिलको आखिरमा वसन्त .तुको साथसाथै चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन्। अप्रिलमा होक्काइडोमा हामीले कस्ता लुगा लगाउनु पर्छ? अप्रिलको सुरूमा, तपाइँलाई कोट र पन्जा चाहिन्छ। हिउँ जुत्ता स्नीकर्स भन्दा राम्रो छ। मा ...
जापान मा यो अप्रिल देखि मे को वसन्त पर्यटन मौसम हो। किनभने त्यहाँ धेरै न्यानो र आरामदायक दिनहरू छन्, पर्यटन स्थलहरू देश र विदेशका मानिसहरूसँगै थिए। ओसाका अप्रिलदेखि शिखर पर्यटन मौसम पनि अनुभव गर्दैछ। यदि तपाइँ अप्रिलमा ओसाकामा बस्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाइँ कस्तो किसिमको कपडा तयार पार्नुपर्दछ? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई एक विचार दिन अप्रिलमा ओसाकाको मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अप्रिलमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। अप्रिलमा ओसाकामा मौसम (सिंहावलोकन) ग्राफ: अप्रिलमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको जलवायु होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। अप्रिलमा, २० डिग्री उच्च तापक्रम भन्दा बढी दिन प्रशस्त हुन्छन्। मौसम सामान्य रूपमा राम्रो छ त्यसैले तपाईं आरामदायक ठाउँहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। यो तातो छ, त्यसैले तपाईलाई सायद जम्परहरू र त्यस्ता दिनको आवश्यक पर्दैन। जबकि, साँझमा तापमान दिउँसो तापमान भन्दा १० डिग्री भन्दा कम कम हुनेछ। यदि तपाईं रातो बाहिर चेरि फूलहरू हेर्न उद्देश्यका साथ हुनुहुन्छ भने, म ...
यदि तपाईं अप्रिलमा टोकियो जानुभयो भने, तपाईंले सायद रमाईलो यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। टोकियो अप्रिल मा एक हल्का वसन्त मौसम छ। तापक्रम सहज छ। अप्रिलको शुरुमा तपाईले चेरी फूलहरूको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। जापान मौसम संघ द्वारा जारी मौसम डेटा को आधारमा, म अप्रिल मा टोकियो मौसम मा एक संक्षिप्त परिचय दिनेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल अप्रिलमा ओसाका र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोकियो मा अप्रिल मा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियो मा अप्रिल मा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा हो (१ 30 1981१-२०१०) मार्चको अन्तमा, टोकियोमा तापमानमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। अप्रिलमा, त्यहाँ दिनहरू हुन्छन् जब अधिकतम तापमान २ 2010 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ। यो तातो छ, त्यसैले तपाईले शहरमा कोट लगाएको व्यक्तिलाई भेट्नु हुन्न। जे होस्, त्यहाँ दिनहरू छन् जब यो रातको चिसो हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाइँ राती चेरि फूलहरू हेर्न जानुहुन्छ, वसन्त कोट वा जम्पर लिनुहोस्। अप्रिलमा जस्तो वर्षा हुन सक्छ, कृपया छाता बोक्नुहोस्। कहिलेकाँही अप्रिलको अन्तमा तातो महसुस हुन्छ। शहरमा, सजिलै न्यानो भएका व्यक्तिहरूले छोटो आस्तीनको लुगा लगाउन शुरू गर्दछन्। ...
जापानी द्वीपसमूह हरेक मार्चमा जाडोदेखि वसन्तसम्मको संक्रमण अवधिमा प्रवेश गर्दछ। मौसम अस्थिर छ र हावा वर्षको यस समयमा बलियो छ। होक्काइडोमा पनि तापक्रम बिस्तारै बढ्नेछ र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ वसन्त नजिकै आउँदैछ। जे होस्, होक्काइडोमा तपाईंले चिसो मौसम काउन्टरमा उपेक्षा गर्नुहुन्न। मार्चमा पनि हिउँ प्रायः होक्काइडोमा पर्छ। मार्चको अन्त सम्म, हिउँ भन्दा बढी वर्षा हुनेछ। जे होस्, निसेको जस्ता स्की रिसोर्टहरूमा तपाईं हिउँको संसारको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा, म मार्चमा होक्काइडो मौसमको बारेमा छलफल गर्नेछु। यस लेखले धेरै तस्विरहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंलाई होक्काइडोको मार्च मौसम कल्पना गर्न मद्दत गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल मार्चमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। मार्चमा होक्काइडोको बारेमा प्रश्न र उत्तर होक्काइदोमा मार्चमा हिउँ पर्दछ? मार्चमा पनि होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ तर वसन्त बिस्तारै आउँदैछ। तपाईं निसेको, आदिमा जाडो खेलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, तर शहरी क्षेत्रहरूमा यस समयमा अधिक न्यानो दिनहरूको साथ हिउँ पग्लिन थाल्नेछ। मार्चमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? मार्चमा होक्काइडो अझै जाडोको बीचमा छ। यो बिस्तारै तातो हुँदै जान्छ र हिउँ पग्लन्छ, तर जाडोको कपडा आवश्यक छ किनकि कम तापमान प्राय: फ्रिजभन्दा कम हुन्छ। कस्तो किसिमको कपडा ...
यदि तपाईं मार्चमा ओसाका जानुहुन्छ भने तपाईको सुटकेसमा कस्तो खालको कपडा प्याक गर्नु पर्छ? मार्चमा, ओसाका जाडोदेखि वसन्त transitionतुमा संक्रमणमा छन्। त्यहाँ न्यानो दिनको साथ समयहरू छन्, तर त्यहाँ धेरै चिसो दिनहरू पनि छन्, त्यसैले कृपया जाम्परहरू जस्तो जाडोको लुगा नभुल्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म मार्चमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाइँले अधिक जानकारी चाहानुभएको महिनाको लागि स्लाइडरबाट चयन गर्नुहोस्। तल मार्चमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। ओसाकाको मौसम मार्चमा (अवलोकन) ग्राफ: मार्चमा ओसाकामा तापक्रम परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको मौसम लगभग टोकियो जस्ता जापानमा होन्शुको जस्तै छ। अन्य शहरहरूमा जस्तै मार्चमा मौसम थोरै अस्थिर छ। त्यहाँ सम्भावित कडा बतासको साथ तुलनात्मक रूपमा धेरै बादल र वर्षाका दिनहरू छन्। मार्चको सुरूमा, त्यहाँ धेरै चिसो दिनहरू हुन्छन्। जे होस्, यो बिस्तारै मार्चको मध्यमा तातो हुनेछ। मार्चको अन्तमा, तातो वसन्त daysतु दिन बढ्नेछ। यस समयदेखि जापानी मानिसहरु त्यो दिनको प्रतिक्षामा हुनेछ जब चेरी फूलहरू फूल्नेछन्। जे होस्, ओसाकामा खिलिएको चेरी फूलहरू भन्दा अलि ढिलो छ ...
टोकियोमा, मौसम अस्थिर छ किनकि मार्च हिउँदबाट वसन्त toतुमा सर्ने समय हो। यदि तपाईं मार्चमा टोकियो यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया आफ्नो छाता नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापान मौसम संघ द्वारा जारी गरिएको मौसम डाटाको आधारमा मार्चको महीनामा टोकियोको मौसमको बारेमा बताउनेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईंले स्लाइडरबाट अधिक जान्न चाहानुभएको महिना चयन गर्नुहोस्। तल मार्चमा ओसाका र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। मार्चमा टोकियो मा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: मार्च मा टोकियो मा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) मार्चमा, न्यानो हावा दक्षिणबाट बग्दछ। यस कारणका लागि, हावा मार्चमा सामान्यतया बलियो हुन्छ। त्यहाँ धेरै बादल दिन छन् र यो धेरै वर्षा हुन्छ। अधिकतम तापमान कहिलेकाँही २० डिग्री भन्दा बढि हुन्छ। यद्यपि यो पूरै वसन्त होईन। निम्न दिन कहिलेकाँही लगभग १० डिग्री गिराउन सक्छ र तपाईं चिसो संग कम्पन हुन सक्नुहुन्छ। तातो र चिसो मौसम को एक चक्र को माध्यम बाट यो बिस्तारै वसन्त हुनेछ। मार्चमा, मौसम अस्थिर छ र तापक्रम द्रुत गतिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले जापानी मानिसहरु पनि हरेक दिन के लगाउने भनेर चिन्तित छन्। यदि तपाईं यात्रा ...
यदि तपाईं वसन्त (मार्च, अप्रिल, मे) को समयमा जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्दा तपाईंले कुन लुगा लगाउनु पर्छ? वास्तवमा, जापानी मानिस प्राय: वसन्त inतुमा के लगाउने भन्ने बारे चिन्ता गर्छन्। जे भए पनि तापक्रम बिस्तारै यस समयमा तातो हुनेछ, तर अझै पनि चिसो लाग्न सक्छ। जापानी मानिसहरु दिन बिहान मौसम पूर्वानुमान सुन्छन् र चिसो भइरहेको छ भने अक्सर कोटको साथ बाहिर जान्छ। यदि तपाईं वसन्त Japanतुमा जापान आउनुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं दुबै तातो र चिसो मौसमको कपडा तयार गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानी वसन्त मा यात्रा को लागी लुगा को बारे मा उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ। मैले तल वसन्तको लुगाको फोटो पनि तयार गरें। तपाईंले पातलो बाहिरी ज्याकेट पनि तयार गर्नुपर्दछ र यो चिसो हुँदा लगाउनु पर्छ। यदि तपाइँ मौसम र मौसम वर्णन गर्न मार्च र मेमा "स्प्रिंग" शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि, तपाइँले लगाउने लुगा फरक फरक हुन्छन्। मार्चमा, त्यहाँ जाडो जस्तै चिसो दिनहरू छन्, त्यसैले यात्राको समयमा तपाईंले पातलो कोट (वसन्त कोट) वा जम्पर ल्याउनु पर्छ। विशेष गरी रातमा यो चिसो हुन सक्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्। अप्रिलमा, यदि तपाईं रातमा चेरी ब्लास्म्स हेर्दा खान वा पिउनुहुन्छ भने तपाईं बाहिर जानु अघि पातलो कोट वा जम्पर राख्नु पर्छ। कोटको सट्टामा तपाईले आफ्नो घाँटीमा स्कार्फ लगाउन सक्नुहुन्छ इत्यादि। मेमा धेरै न्यानो दिनहरू आउँछन्, त्यसैले तपाईले पहिल्यै छोटो स्लीभ शर्ट लगाउनु भएको हुन सक्छ। जे होस्, त्यहाँ मे महिनामा चिसो दिनहरू छन् ...